Nhau - Qingdao Florescence Tubes Commerce Hondo Iron Mauto Anokosha Kudzidziswa Musasa
Kubva Chivabvu 12 kusvika Chivabvu 13, 2020, Qingdao Florescence International Trade Co, Ltd. yakave nerombo rakakwana kukoka VaIwe kubva kuChangqing Industrial Group kutidzidzisa tese. Mumazuva maviri aya, vatinoshanda navo Ivo vese vakatora chikamu nekushingairira, vakadzidza nesimba, uye vakawana zvakawanda, uye ndinoda kutenda Mr.Gai naVaIwe nekuzvipira kwako.
Anogashira akaonekwa kuunza zvirimo muchikamu chekudzidzisa uye nemitemo yechiitiko.
Mudzidzisi Mras Iwe tsananguro ine shungu
Pasi pehutungamiriri hwaMudzidzisi Iwe, munhu wese akakurumidza kupinda munzvimbo yepamusoro yekudzidza. Mufananidzo unotevera unoratidza Mr. Iwe uchitsanangura maitiro ekushandisa iyo 5W nzira kune basa chairo. Vose vatinoshanda navo vakapinda muchirongwa. Wese munhu akabatana zvinechido nemhepo ine hupenyu
Mushure mezuva rekudzidziswa, Mudzidzisi Makakumbira wese kuti agovane hurukuro dzake kune mumwe nemumwe muboka. Wese munhu nekushinga uye nekushingaira akagovana akasiyana hunyanzvi hwebasa hwadzidza nhasi, uye maitiro ekushandisa misimboti pabasa rinoshanda.
Ndatenda nemabasa enyu uye kurima! Ndatenda nemupiro uye rutsigiro! Qingdao Florescence kambani ichave zvakare "bhizinesi evergreen"!
Florescence ichaenda kuSEMA Show muLas Vegas, USA, Mbudzi 5-8.
Ticharatidza zvigadzirwa zvedu zvinoneta zvemukati machubhu uye nekurovera ipapo, tichitarisira kusangana newe padumba 41229!
tinogona kupa mabutiri emukati machubhu uye echisikiro rabha machubhu ematai sezasi.
Wirivhiri Tire Inner Tube
Indasitiri Tire Inner Tube
Rori Tire Inner Tube
Tarakita Tire Mukati Tube
OTR Tire Yemukati Tube
Heavy Duty Rubber Tube Rwizi Rwushamba Inoyerera Tube
Chando Ski Sled Tube